Sunday May 31, 2015 - 15:07:28 in Wararka
Shirwaynihii 5aad ee Ururka Umis Shalay sabtidii ay ahayd 30 ka bisha maj ee sanadkan 2015 ayuu Ururka Umis kuqabtay hoolka shirarka ee Dugsiga Tjärnaängskolan, shirwaynihii 5 aad ee ururka tan iyo markii la'aasaasay, agoosto 2010.
Shirwaynihii 5aad ee Ururka Umis Shalay sabtidii ay ahayd 30 ka bisha maj ee sanadkan 2015 ayuu Ururka Umis kuqabtay hoolka shirarka ee Dugsiga Tjärnaängskolan, shirwaynihii 5 aad ee ururka tan iyo markii la'aasaasay, agoosto 2010. Shirka waxaa kasoo qaybgalay xubno aad ufara badan uu ururka katirsan iyo marti sharaf kale.
Waxaa laguso bandhigay shirwaynaha waxqabadkii ururka ee sanadkii 2014 ta, waxaa sidoo kale lagusoo bandhigay dhaqaalihii ururka soo galay muddadaa iyo kharashyadii kabaxay, sidoo kale qorshaha ururka ee labada sano ee soo socdo la qorsheeyey in la fuliyo.
Waxaa shirwaynaha lagusoo bandhigay mashaariicda uu uruka hadda gacanta kuhayo hirgalintiisa iyo riyada ururka ee kusaabsan heerka uu rabo inuu gaadho iyo waxaa uu tiigsanayo mustaqbalka dhow iyo kan fogba.
Waxaa shirwaynaha lugu ansixyey kadib soo bandhigiddii guddiga doorashada ee ururka in mar kale loo doorto guddoomiyaha ururka Umis Axmed shiil Muxumed. Waxaa sidoo kale la ansixiyey 6 da kale ee xubnood ee kamid noqonaya maamulka cusub ee ururka ee iyana lagarabo inay ururka waxka hagaan labada sano ee soo socoto. Waxaa isla shirka lagu ansixiyey xubnaha kaydka maamulka, guddiga doorashada, hantidhowrka iyo inta uu noqoni qaaraanka ururka.
Ugu danbayntii waxaa hadallo gubaabo iyo dhiirrigalin ah halkaa kasoo jeediyey Ingineer Abuukar Xasan Geelle oo ururka xubin ka ah iyo Jan-Olof Lundberg oo ah sarkaal katirsan maamulka magaalada Borlänge.